В Кабардино-Балкарии урожайность картофеля выше прошлогодней — Картофельная Система
Beeraha Kabardino-Balkaria, waxay bilaabeen goosashada baradhada, oo sanadkaan ay haysteen 8,3 kun oo hektar, oo u dhiganta heerka sanadkii hore.
Ilaa hada, baradhada ayaa laga qoday dhul dhan 1,1 kun oo hektar. Celceliska soosaarku waa 203 boqolkiba hektar ama 101,5% marka loo eego isla muddadii sanadkii hore. Sanadka 2019, goosashada guud ee baradhoku wuxuu noqday 196 kun oo tan. Sannadkan, waxaa la filayaa inuu helo dalag baradho ah oo aan ka yarayn sidii sanadkii hore.
Tags: baradho korayaKabardino-Balkariadhalid koritaan
Kabardino-Balkaria, baradhada ayaa laga goostay kala badh aagga